टि बार एण्ड थ्री सी क्याफे- 'चिया साथि र गफको' उत्कृष्ट समिश्रण - ParyatanBazar.com
टि बार एण्ड थ्री सी क्याफे- ‘चिया साथि र गफको’ उत्कृष्ट समिश्रण
पौष ४ ,काठमाण्डौ। ‘चिया’ पारखिहरुको लागि यो शब्द मै मिठास छ। विश्वभरि नै सबैभन्दा बढी पीइने पेय पदार्थको रुपमा पनि लिइन्छ चियालाई। स्वादको लागि स्पेसल मानिने चिया दैनिक जसो हरेक नेपालीको घरमा पाक्छ। घरमा आउने अतिथिको लागि चिया, साथिभाइ संगको भेटघाटमा चिया, डेटिङ्गमा चिया, मिटिंगमा चिया, कसैलाई पर्खदा चिया, अफिस बाट फर्कदा चिया त्यसैले चिया ‘चिया’मात्र नभई मान्छेको ‘भाबना’ पनि हो। चिया संग हरेक इमोसंन साटिएको हुन्छ , दुखको, सुखको, मायाको, बिछोडको, कतै हासोको कतै आसुको त्यसैले त होला चिया मन नपराउने मान्छे कमै मात्र पाइन्छन।
धेरैले चिया स्वादकै लागि पिउँछन् । हामीले पिउने चिया पनि आ–आफ्नै छन् । कोही चियामा दूध मिसाएर त कोही नमिसाई । हरेक तरिकाले फरक–फरक स्वाद चियामा पाउन सकिन्छ । चिया त हरेक चोक, गल्लि, घर, होटल र रेस्टुराहरुमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ तर पनि कतिपय मान्छेहरुले चिया संगै नया ठाउँ र नया स्वाद लिन रुचाउछन। एकान्तमा चिया संगै फरक खाले अनुभूति, अनुभव र बेग्लै बेग्लै चिया स्वादको लागि तपाइहाम्रो माझ चियाको भिन्न भिन्न खाले चियाको स्वाद पस्कदै आइरहेको छ ललितपुरमा रहेको “टि बार एण्ड थ्री सी कफी’ !
उसो त टि बार एण्ड थ्री सी कफी ले सबै खाले पर्यटक र चिया/कफी पारखिहरुको लागि आफ्नो स्वाद पस्कदै आइरहेको छ। नेपालको पहिलो चिया बार जसले रोडोरेण्डन टी, मिण्ट टी,ब्लाक टी, मिल्क टी, ग्रीन टी, पर्ल ग्रीन टी, प्रिमियम टी लगायत भिन्न भिन्न २० प्रकार भन्दा बढी स्वादको चिया बितरण गर्दै आइरहेको छ। प्रोसेष्ड र नन् प्रोसेष्ड चिया संगै कफीहरु खाने र लैजाने सुबिधा पनि उपलब्ध छ। साथै यो चिया कफी क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनेहरुको लागी बरिष्ठा ट्रेनिङ्ग पनि संचालन हुदै आइरहेको छ। हालसम्म धेरै स्टुडेण्टहरुले यहा बाट ट्रेनिङ्ग लिई देश बिदेशमा आफ्नो ख्याति प्राप्त गर्न सफल हुनुभैसके छ।
संचालन गरेको सुरुसुरुमा आफ्नो चिया सपमा मान्छेहरुको भिड देख्दा लाग्थ्यो नेपालमा यति धेरै चियापरखिहरु रैछन, तर विश्वमा कोरोना सुरु भएसंगै सबैखाले अर्थब्यबस्था नै धरापमा पर्यो त्यसैको प्रतक्ष्यदर्शी बन्न पुग्यो ‘टि बार एण्ड थ्री सी कफी’ पनि। कोरोना अघि थेग्न नसक्ने ग्राहक आउने टि बार एण्ड थ्री सी कफीमा कोरोना कहर सुरु भए संगै शुन्यता छाएको छ संचालक प्रसेन गैरे भन्नुहुन्छ। यो लकडाउनको समय भनेको मान्छेहरुको लागि एक्दमै संबेदनसिल समय थियो , यो समयमा मान्छेहरूले आफुलाइ मृत्युुबाट जोगाउन कोठा/ घर भित्र थुनेर राख्न त सफल भए तर कति धेरै मान्छेहरु यो सब बाट मोनोटोनसको सिकार पनि भए। उनिहरुमा पहिलाको जस्तो स्फुर्ती छैन साथै नयाँ जोस जागर पनि। पुन बिस्तारै मान्छेहरु कोरोना संगै लिभिङ्ग टुगेदरमा बाच्न सिक्दै छन् तर उमंग बिहिन।
त्यही लकडाउनले ओझेलमा पारेको जोश जागर र स्फुर्ती पुन प्राप्त गर्न घुम्नु, चिया पिउनु,साथीभाई संग आफ्नो समय बिताउनु, पनि एउटा मेडिटेसन हो जसले उ प्रकृतिको र चियाको नजिक रहन्छ तब प्रकृतिको रंग, चियाको मिठास संगै जिन्दगीको अनुभव बटुल्छ र फेरि सिक्छ कि जिन्दगी सबै दुख सुख र खुसी को समिश्रण हो । हामी बार,रेस्टुरेण्ट ब्याबसायी भएपछि यो हाम्रो पनि कर्तब्य हो सहज बाताबरण सिर्जना गरीदिने । त्यसैले हाम्रो टि बार एण्ड थ्री सी कफीले ग्राहकबर्गको आवश्यकतालाइ मध्यनजर गर्दै एउटा कोरोना मैत्रि बातावरण सृजना गरिदिएको छ। जहा तपाइले चियाको मिठास संगै जिन्दगीको मिठासको अनुभब गर्नुहुने छ। तर यो अनुभबको लागि चै तपाइँ पुग्नुपर्ने छ ‘टि बार एण्ड थ्री सी कफी’ ललितपुर।
चिया पिउन किन जाने त ललितपुर ?
ललितपुर आफैमा एक पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र हो। काठमाडौं उपत्यकाका तीन सहरमध्ये पनि ललितकलाका दृष्टिले पाटन सहर धेरै नै उत्कृष्ट छ । पाटनका हरेक ऐतिहासिक सम्पदाहरू आश्चर्यजनक मात्रै छैनन्, जति हेर्यो उति हेरौं हेरौं लाग्ने मनमोहक छन् । यी संरचनाका हरेक ढुंगामा हरेक खम्वामा, हरेक झ्यालढोकामा कुँदिएका कलाकृतिमा लालित्य छ । वास्तु कलाका हिसाबले ललितपुर आफैंमा निकै प्राचीन सहरहरूमध्येमा पर्दछ । यहाँ अद्वितीय कलाका नमुनाहरू त पाइन्छन् नै, समयका हिसाबले पनि ती अति प्राचीन नै मानिन्छन् । ललितपुरको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको त युगका हिसाबले यहाँ सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगका विशेषताहरू झल्कने गरी कलात्माक भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । प्रायः १६औं शताब्दीमा बनेका मन्दिर तथा देवलहरू यहाँका प्रमुख आकर्षक मानिन्छन् । यो मध्ये एक हो गोल्डेन टेम्पल (शाक्यमुनि बुद्ध) यसैको समिपमा थोरै अगाडि (५० मिटर ) रहेको टि बार एण्ड थ्री सी कफी जसले कन्भर्सेसन, कम्युनिटि र कल्चरलाई एक्कै सुत्रमा जोड्ने काम गर्दै आइरहेको छ । हो यहि पर्यटकिय हब मानिने ललितपुरलाई बिगत ३ बर्ष देखि आफ्नो मिठ्ठो फरक फरक स्वाद पस्कदै आइरहेको छ टि बार । प्राय पर्यटकहरु आफैमा एक चियाको पारखी हुन्छन भने उनीहरुलाई ललितपुर घुमिसकेपछीको जुन सेल्फ टाइम को आवश्यकता त्यो टि बार एण्ड थ्री सी कफीले पुरा गर्दै आइरहेको छ जहाँ उनीहरुले चिया र कफीको चुस्कीमा आफ्नो अनुभब साट्न पाउछन, र भाबना बाट्न पाउछन।
ट्रेनिङ्ग लिन चाहाने र टी बारमा चिया पिउन जान चाहनेहरुको लागि सम्पर्क नम्बर : 9864275227 रहेको छ भने गुगल म्यपिङ्गलाइ आधार बनाएर पनि त्यहा सम्म पुग्न सकिन्छ।